La -taliyayaasha Socdaalka ee Mareykanka waa Ceebayn Caalami ah: Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » La -taliyayaasha Socdaalka ee Mareykanka waa Ceebayn Caalami ah: Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
COVID-19 wuxuu beddelay adduunka. Tani waa inay sidoo kale ku xisaabtamtaa sida digniinta safarka loo soo saaro. Mareykanka waa inuu noqdaa dalka kaliya ee adduunka ku dhuftay dhulalkiisa digniino HA KU SAFARIN. Mareykanka waa inuu sidoo kale noqdaa waddanka kaliya ee adduunka oo ay ku jiraan derisyada saaxiibtinimo ee galay heerka ugu sarreeya liiska “ha safrin”. Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee fadhigeedu yahay Hawaii ayaa soo saartay bayaan mowqif oo ku boorrinaya Mareykanka in uu dib u shaqeeyo habka digniinta safarka loo soo bandhigo.
Digniinaha safarka waxaa bixiya dawladaha si ay muwaadiniintooda uga ilaaliyaan dambiyada, dilka, iyo dagaallada.
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka waxay soo saartaa digniinaha safarka ee muwaadiniinta Mareykanka, waxayna digniintaani saameyneysaa shaqsiyaadka socotada ah, safarka kooxeed, socdaalka maraakiibta, iyo heshiisyada.
Ka soo horjeedka digniinta safarka waxay ku yeelan kartaa, wakaaladda socdaalka, khadadka safarka, ama qorsheeyaha kulanka, cawaaqib dhaqaale ama sharci oo daran.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) maanta waxay soo saartay bayaan meeleyn ah oo lagu dhiirrigelinayo Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Mareykanka (CDC) si ay uga fiirsadaan beddelidda habka la -talinta socdaalka ee muwaadiniinta Mareykanka ee u safraya “waddamada shisheeye” hadda la daabaco oo la isgaarsiinayo.
"COVID-19 wax walba wuu beddelay," ayuu yiri Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz. “Waa wax aan la rumaysan karin marka waddan sida Bahamas ama Giriig ah lagu qoro isla qaybta Afgaanistaan ​​ama Kuuriyada Waqooyi. Tani waa wax laga xishoodo oo qosol ku dhow. ”
WTN waxay jeclaan lahayd inay aragto 3 heerar qiimeyn madaxbannaan ee waddan kasta oo ku qoran liiska la -talinta socdaalka ee Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ama CDC.
1. Qiimeynta ku saleysan amniga iyo arrimaha aan COVID la xiriirin.
2. Qiimeynta ku saleysan safrayaasha aan tallaalin COVID.
3. Qiimeynta ku salaysan socdaalayaasha la tallaalay COVID.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay ku boorineysaa inay ka saarto Guam, Puerto Rico, iyo Jasiiradaha Virgin ee Mareykanka liiska “waddamada shisheeye.”
Guam, Puerto Rico, iyo US Virgin Islands waa dhulal Mareykan ah ee ma ahan dalal shisheeye. Dadka halkaas ku nool waa muwaadiniin Maraykan ah. Waa in loola dhaqmaa sida gobol kasta oo Maraykan ah. Dowladda Mareykanka inay ku kala saarto dhul Mareykan leh digniin socdaal oo Heerka 4 ah waa wax laga xishoodo, ”ayuu raaciyay Steinmetz. "Waxaan u arkaa takoorkaan inuu ixtiraam darro ku yahay xubnaheenna badan ee adeegga Mareykanka ee ku sugan Guam."
Nidaamka Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka wuxuu aqoonsan yahay 4 heer oo la -talin safar ah:
Samee Taxadarka Caadiga ah
Jimicsiga Digtoonaan Badan
Ka fikir Safarka
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka waxay soo saartay Heerka ugu sarreeya ee La -talinta Safarka ee ka dhanka ah waddammada soo socda, iyadoo ku leh Muwaadiniinta Mareykanka: HA KU TAGIN waddamada ku qoran:
Faransiiska Galbeedka Indies
Israel West Bank iyo Gaza
Xarunta Xakamaynta Cudurrada ee Mareykanka ayaa soo saartay digniinteedii ugu sarreysay ee safarka oo ka dhan ah waddamada “shisheeye” ee soo socda, iyadoo leh:
Jersey (qayb ka mid ah UK)
Puerto Rico (Mareykanka)
Digniinta safarka waxaa laga bixiyaa ugu yaraan - 1 ilaa ugu daran - 4. Qiimaynta 4 micnaheedu waa khatar sare, “ha tegin.” Hadda, Waaxda Arrimaha Dibaddu ma kala soocdo arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dagaalka iyo amniga.
Waxay badiyaa adeegsataa hab istaroog ballaadhan, oo waddammada oo dhan ku rinjiyeeya qiimeyn isku mid ah, sidaas darteedna, keenta gunaanad been ah
La -taliyayaasha Waaxda Arrimaha Dibedda ee hadda jira waxay rinjiyeeyaan meel sida Afgaanistaan ​​ama Kuuriyada Waqooyi leh digniin la mid ah oo hadda ka jirta waddamada ay ku jiraan Bahamas ama Jamaica. Dhaqaalaha Bahamas iyo Jamaica aad ugu tiirsan yihiin booqdayaasha Mareykanka.
Intaa waxaa dheer, Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay heshaa la -taliyayaasha Socdaalka Mareykanka ee hadda la soo saaray Dhulka Guam ee Mareykanka la yaab leh, takoorid, iyo marin habaabin. "Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka iyo CDC awood uma laha inay ka taliyaan safarka ama soo saaraan la -talin ka dhan ah dhul ama gobol kale oo Mareykan ah," ayaa lagu yiri qoraalka. Mary Rhodes, Gudoomiyaha Guam Hotel & Association Restaurant Association.
COVID wuxuu u baahan yahay qaab cusub, waana inay jirtaa digniino socdaal oo ku saleysan dembiyada iyo amniga, iyo digniinta labaad ee COVID. Digniinahaan dambe waa inay kala soocaan kuwa la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin oo ay tixgeliyaan jiritaanka baaritaan degdeg ah iyo imtixaannada serological-ka si sahlan loo maamuli karo marka la soo galo iyo marka laga baxo waddan.
Bixinta baaxadda leh ee aan la kala sooci karin ee la -taliyayaasha safarka ayaa horseedaysa ma aha oo kaliya fowdo dhaqaale laakiin waxay hoos u dhigaysaa digniinaha safarka, takoorka, iyo dhibaatooyinka siyaasadeed.
WTN waxay ku boorineysaa Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada inay horumariyaan hab aad u nuur badan oo ay ka shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa go'aammo aad u xeeldheer oo ku saabsan la -taliyayaasha safarka.
Qoraalka WTN Position waxaa saxiixay Madaxweynaha WTN Dr. Peter Tarlow.
Effie Fletcher wuxuu leeyahay,
September 9, 2021 at 05: 17
Si buuxda u raac oo mahadsanid!